Fidirana an-trano Reef Resilience
Mihoatra ny 60% amin'ny haran-dranomasina manerantany no atahorana mivantana avy amina fampiroboroboana anthropogenes eo an-toerana ref ao anatin'izany:
Fandanindran-tena mahatsiravina sy manimba
Loto mifototra amin'ny tany sy marin-drano
Fampandrosoana ny tany
Fizahantany sy fialamboly
Amin'ireo fandrahonana any an-toerana ireo, ny fitrandrahana dia heverina ho loza mitatao amin'ny ankamaroan'ny vatoharan-dranomasina eran-tany. Ny fampandrosoana ny morontsiraka sy ny fahalotoan'ny tany dia misy fiantraikany amin'ny 25% amin'ny haran-dranomasina maneran-tany. Ny vatoharan-dranomasina any atsimo atsinanan'i Azia dia heverina ho mora indrindra ho an'ny tsindry ao an-toerana, miaraka amin'ny manodidina ny 95% amin'ny vatohara noheverina ho atahorana.
Ny sarintany etsy ambany dia mampiseho ny fiovan'ny fandrahonana eo an-toerana ho an'ny faritra vatohara manerantany manerantany eo anelanelan'ny 1998-2007 miorina amin'ny tatitra 2011 ao amin'ny tatitry ny Risk Revisited. ref
Nandritra ny folo taona farany, nihamaro ny fiantraikan'ny olombelona tamin'ny vatohara. Noho izany, ny ampahatelon'ny vatoharan-dranon'izao tontolo izao izay atahorana amin'ny fitomboan'ny atidoha eo an-toerana dia nitombo mihoatra ny 30% nandritra izany fotoana izany.
Ny lahatsary Coralax